Maamule iskuul oo la qabtay isaga oo qish u samaynaya askari AMISOM - BBC News Somali
Maamule iskuul oo la qabtay isaga oo qish u samaynaya askari AMISOM
Image caption Benjamin Manirambona waa maamule iskuul oo qish lagu qabtay
Maxkamad ku taala dalka Burundi ayaa xukun ku riddey nin macalin ah, sidoo kalena maamule ka ah iskuul kaas oo la qabtay isaga oo imtixaam u fariistay si uu u matalo askari dalkaas u dhashay oo hawlo nabad illaalin ugu maqan Soomaaliya.
Benjamin Manirambona ayaa lagu xukumay 5 sano oo xarig ah, waxaana laga mamnuucay in uu xafiis dowladeed fariisto muddo 10 sano ah.
Ciidamada nabad suggida oo hayay xog hoose ayaa habeenimadii sii tagay mac-hadka farsamada ee Butera ee ku yaala magaalada Bujunbura ku yaala, halkaas oo subaxa xiga uu imtixaamka ka dhici lahaa.
Benjamin oo xiran dharkii ardayda ayaa fariistay imtixaamka, wuxuuna sheegay in uu matalayay askari AMISOM ka tirsan oo doonayay in uu helo buundooyin wanaagsan si uu jaamacad u galo. Askari ayaa ku maqan Soomaaliya sida warbaahintu sheegtay.
Dalka Burundi oo dad badan lagu laayay
Burundi oo ka bexeysa maxkamadda ICC
Burundi oo xayiraad saartay shaqaalaha UN
Askari ayaa lacag u balanqaaday macalinka haddii uu qish u sameeyo, imtixaamkana u fariisto.
Image caption Macalin Lazard Nihezagire (bidix) iyo xisaabiye Eric Nkurunziza (dhexda) ayaa sidoo kale xabsi loo direy
Wasiirka waxbarashada Burundi Janvière Ndirahisha oo goobtii ninka laga qabtay la tagay ciidanka dhar cadka ah, ayaa diiday sharaxaadda macalinka, wuxuuna sheegay in aysan ahayn markii koowaad ee uu falkan sameeyo.
Image caption Benjamin Manirambona (midig) iyo wasiirada waxbarashada Janvière Ndirahisha (bidix)
Waxaa lala xiray xisaabiyihii iskuulka Eric Nkurunziza iyo macalin Lazard Nihezagire oo min labo sano oo xabsi ah loo direy, shan sanana waxaa laga mamnuucay in ay xafiis dowladeed qabtaan. Waxaa lagu heley in ay qarinayeen falka macalinka.
Ardayda Burundi ee imtixaanaadka u fariista ayaa imtixaamka ku gala iskuulaad aanan ahayn kii ay dhiganayeen, sidaas darteed ayay macalimiinta u aqoonsan waayeen Benjamin oo arday iska soo dhigay.